Isizathu ezijwayeleke kakhulu kungani imoto ngeke uqale ubusika - ibhethri liphele.
Wazi kanjani ukuthi ibhetri iphansi?
Izinkinga nge ibhethri ukhombise "izimpawu" elandelayo, lapho ungabona lapho ujike ukhiye ukuthungela:
"Abayekethisayo" sengathi kancane, ukujikeleza ukuziqalela, ngemva kwalokho umshini noma kunzima ukuqala, noma sizoya izibani kwi iphaneli sensimbi ;
imoto ngeke uqale ayinikezi iyiphi "izimpawu zokuphila" - ku iphaneli izibani ungayishisi, akubandakanyi umsakazo, izibani kanye namanye amadivayisi zingase zingasebenzi ngisho alamu ;.
Esimweni sokuqala, it is kancane ibhethri lingashajwa, okwesibili - ngokuphelele.
Izimbangela ibhetri iphansi:
Uma uke wasebenzisa isikhathi eside isikhathi iyunithi, isitofu, izibani, izihlalo ezifudumalayo, njll .. Instruments nge injini.
Uma umshini ukuma isikhathi eside, ikakhulukazi ongaphakeme okushisa kuma.
Uma ibhethri uphumile emgqeni.
Bheka esikhungweni sesevisi bese ubacela ukuba uthole isizathu sokuthi kungani ungaqali imoto kubanda. isimo ibhethri Lo chwepheshe amasheke, operation ukuziqalela futhi generator umthwalo. Kwenzekani ngokulandelayo incike Imiphumela yokuhlola.
Uma ibhetri iphansi, kodwa isesimweni esihle, kumele sisuswe futhi inqe. Akubalulekile ukwenza lokhu ekhaya, ngoba ngesikhathi senqubo nokuguquguquka evala anobuthi.
Uma ibhethri "aqhubeka ephila ngemva yayo" shintsha ngcono. Uma lokhu kungeke kwenzeke, ungazama ngezikhathi ukukhokhisa i, ngokuvamile ukushayela imoto, shisisa imoto ebusuku. Leyo misebenzi kuyoba yisisombululo sesikhashana, kodwa kuyafaneleka ukukhumbula ukuthi ibhethri ungakwazi senqabe okwamanje ezingalindelekile ngokuphelele. Ngakho-ke, kufanele esikhundleni ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Abanye ochwepheshe bakholelwa ukuthi eziphansi amabhethri kufanele kube kanye njalo ezinyangeni ezintathu ashona, ngoba abakwazi ukushaja ngokugcwele kusukela alternator.
Uma imoto yakho ngeke ukuqala kubanda ngokuvamile:
kulungele imoto ebusuku;
ngaphambi kokuba uqale imoto, amakhandlela efudumele izikhathi 2-3;
ukugcina ukuthungela esitshalweni kuze kube ngomzuzu lapho imoto ngeke ukuqala noma ayikahlanganiswa ucime izibani kwi iphaneli sensimbi;
uma wazi ngokucacile ukuthi ezingeni lokushisa emotweni ethile ngeke iqale, musa ukuchitha hhayi amandla webhethri - nje ukuthatha wire ukuze "Ukulekelela" futhi ubheke omakhelwane. Ngakho ngeke umsindise isikhathi.
Uma imoto ngeke uqale "bebodwa", zama "ukukhanya". Uma ibhethri liphele ngokujulile, kungase kudingeke isikhathi esiningi, nize nembathiswe amandla ngeke esanele ukwenza umshini wakho.
Enye - yokudonsa, kodwa ingasetshenziswa kuphela izimoto ne yokudlulisela mathupha. Futhi, akukuhle ukuba ulinge, uma ungaqiniseki ukuthi ngeke sibhekane ngokuphumelelayo ukuphathwa ngaphandle amandla ayo.
Ezinye zezizathu ezenza imishini futhi ngeke uqale:
- yekhwalithi ephansi nophethiloli. Uma u-diesel buhlangene, ungakwazi wafaka imoto ebhokisini efudumele futhi ugcwalise ngophethiloli ezinhle.
- inhlansi okuyiphutha Imigudu. Isimo yalezi izingxenye kungcono ukuhlola ngaphambi kubanda.
- wiring, inkinga ukuziqalela, i-generator noma fuel uhlelo. Ukuze ukuhlola nokuxazulula inkinga, ubheke ukugeza imoto.
Izincwadi ku-ukulungisa kanye nokugcinwa Bmw X5
Wall, umba i egumbini lokuphumula - okuyisici esibalulekile noma iyiphi Ingaphakathi
Izithelo ukuhlafuna marmalade "HARIBO" (HARIBO): isakhiwo, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Indlela eluka kwamagoda amabili nhlangothi zombili Amathiphu
Ukuhlaziywa nomlando inkondlo "Winter Ebusuku" (Pasternak)